Kitra – «THB Ligue des champions» : nomontsanin’ny Cnaps ny FC Maeva | NewsMada
Kitra – «THB Ligue des champions» : nomontsanin’ny Cnaps ny FC Maeva
Nanomboka, omaly zoma ? tany Fianarantsoa sy Mahajanga ny fihodinana faharoa amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny baolina kitra na ny «THB Ligue des champions». Voahaja aloha ny lojika, teo amin’io andro voalohany io, satria tafavoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa lehibe.
Anisan’ireny ny Cnaps Sport, izay nanamontsana tamin’ny isa mavesatra, 7 no ho 1 ? ny FC Maeva, avy any Betsiboka, tany amin’ny kianja Rabemananjara Boeny. Nanamparan’ny Cnaps ny heriny rehetra ary nanalany ny fony, tamin’ny fahavoazany teo amin’ny fiadiana ny amboara, ry zareo FC Maeva.
Mbola tamin’ny isa mazava, 5 no ho 1, ihany koa ny nanilihan’ny Hzam Amparafaravola ny USSK Diana. Lavon’ny Ajesaia, tamin’ny isa, 3 no ho 1 kosa ny Varatraza avy any Sofia. Tany Fianarantsoa, samy nahazo fahombiazana avokoa ny ekipan’Analamanga. Lavon’ny Cosfa, tamin’ny isa 2 no ho 1, tao amin’ny kianja filalaovany ny Zanakala FC ary tamin’ny isa 2 no ho 0 kosa ny, nandresen’ny Elgeco Plus ny FC Top Dom, Amoron’i Mania.
Resin’ny RTS Jet Mada Itasy, tamin’ny isa 1 no ho 0, ny FC Angele Anosy. Hitohy rahampitso alahady, ny andro faharoa, amin’ny fifanintsanana, eo amin’ity “THB Ligue des champions” ity.